टिकटकमा भाइरल भएकी बेहुली आमासंगै आइन् पहिलो पटक मिडियामा ! पूरा हेर्नुहोस् (भिडियो सहित) – SUDUR MEDIA
December 12, 2020 December 19, 2020 AdminLeaveaComment on टिकटकमा भाइरल भएकी बेहुली आमासंगै आइन् पहिलो पटक मिडियामा ! पूरा हेर्नुहोस् (भिडियो सहित)
धनगढीकी बेहुली शान्ती शर्मा मुडवरीले आमालाई सम्झाउँदै गरेको भिडियो निक्कै भाइरल भएको छ । उनले ‘पर्सी आइहाल्न्या हुँ खिरपुरी बनाइराख्नु । अचार पनि, धेरै खान्या हुँ । हिजो कम खाँ हुँ नि मैले ! धेरै खान्या हुँ । नरुनु ।’ भन्दै शान्तिले बेहुलीलाई माइती बिदा गर्ने क्रममा आमालाई सम्झाउँदै कारबाट भनेकी थिइन ।
‘विचार ग’रेस् है आफ्नो । आफ्नो शरीर स्वस्थ भएपछि मात्र सबै चिज हुन्छ है । ख्याल राख्नु।’ सोही भिडियोमा दुलहीको गाला सुम्सुम्याउँदै आमाले भनेको देख्न सकिन्छ । सारा मल्ल ठकुरीको टिकटक एकाउन्टबाट सार्वजनिक भएको यो भिडियो केही दिनमा नै लाखौँले हेरेका छन् । उक्त भिडियो अहिले युट्युबमा र फेसबुकमा पनि धेरै शेयर भैरहेको छ ।
उनको भिडियो अहिले टिकटकमा निक्कै भाइरल बनि रहेको छ । केहि दिन मै लाखौले हेरी सकेका छन । विबाहको दिन शान्तीले गरेको वाचा कबुल अनुसार उनी फेरी माइतीघर आएर मज्जासँग खाना खाएको अर्को भिडियोमा देख्न सकिन्छ । उनले आमाको हातबाट खिरपुरी र अचार पनि खाएकी छन् ।
धनगढी उप–महानगरपालिका–५ हसनपुरकी शान्ति शर्मा मुडभरीको मंसिर २२ गते विवाह भएको थियो । माइतीघरबाट जन्ती बिदाइ गर्ने बेला शान्तिकी साथी सारा मल्ल ठकुरीले उनलाई सरप्राइज दिन जानकारी समेत नदिएर त्यो भिडियो कैद गरेकी थिइन् । नवदुलही शान्ति शर्मा मुडवरीले आफू भाइरल भएपछि मात्र भिडियो खिचिएको बारे थाहा पाएको बताएकी छन् ।
सामाजिक संजालमा भाइरल बनेकी शान्ति पहिलो पटक मिडियामा कुराकानी गर्न आएकी छिन् । थप भिडियोमा हेर्नुहोस्: